Waa maxay kaarka SDXC iyo meesha waxaa sida caadiga ah loo isticmaalo?
SDXC ayaa loo arki karaa Intaa waxaa dheer ugu dambeeyey galay qoyska kaararka SD sidii loo bilaabay sannaddii 2010 si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xidhiidha baahida iyo dalabaadka ka mid ah cajalado HD. Waxaa sidoo kale in la xuso in baahida dadka isticmaala aan la kulmay oo kaliya laakiin kaararka waxaa sidoo kale la hubiyo in ugu wanaagsan ee user lagu siiyay haddii ay jecel yihiin in ay toogtaan qaab AVCHD ku dhafan oo ka mts iyo m2ts format. Waxaa sidoo kale in la xuso in user helo natiijooyinka ugu fiican marka la eego keydinta iyo sidoo kale kaararka mar walba waa kuwo ka sarreeya 64GB iyo cabbirka oo uu soo dhigay ilaa hadda waa in 2TB oo sidaas daraaddeed user waa inay hubiyaan in sawirada iyo videos kuwa qeexitaanka sare aan la qabsaday oo kaliya, laakiin sidoo kale ku kaydsan ee aad aaminsantahay oo meel ugu horumarsan kaydinta jidaynayey user si ay u helaan iyada oo aan arin kasta. Xowliga qoraal xogta sidoo kale waa laga cabsado oo sabab la mid ah waa in la ogaadaa in user ka helaysaa natiijada ugu fiican marka ay timaado toogtay hab dilaaca ama in la hubiyo in videos HD waxaa lagu qabtay. Xowliga qoraal xogta ilaa 300MB / s oo ah ka mid ah kaararka kale oo ka tirsan qaybta isla weyn u tegi kartaa. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay user si loo hubiyo in arrimaha kaydinta guud ahaan waxaa lagu xalin iibsigu card SDXC oo hubiyo in gobolka natiijada farshaxanka waxaa lagu helay oo user helo awoodda ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo abid ka dhigi lahaa. Nidaamka file ah in la isticmaalo kaadhka SDXC waa exFAT iyo warka wanaagsan waa in dadka isticmaala ay sidoo kale ka heli kartaa kaarka micro SDXC in dhawaan la bilaabay by saarayaasha in laga sii qaato technology ee heerka ku xiga. Isticmaalka kaarka waa mid fudud iyo sida kaarka SD kasta oo kale oo la galin karo oo loo isticmaalo si fudud oo ku qanacsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ku bilaabi kartaa laga bilaabo xawaare hoose ee 104MB / s kaas oo sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan marka ay timaado kaararka ee ku sifayn la mid ah oo sabab la mid ah ay sabab u tahay xawaaraha qoraal xogta kaadhkan sidoo kale waa weyn lagu talinayaa in dhammaan dadka isticmaala si ay arrinta meel bannaan iyo kaydinta waxaa loo xaliyay iyada oo wax kasta oo arrinta iyo dhibaato. Kaararka SDXC waxaa sii la sameeyey iyo technology la quudiyey oo kobciya si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa in dadka isticmaala oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in kaadhka s taxadar leh ahaysiiyey si dhalna ma lahayn dhacdaa in arrintan la xiriira iyo adeegyada ugu fiican yihiin muuqan riyaaqay.
Soo Celinta card SDXC aad ula ugu fiican card SDXC Recovery Software
Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo barnaamijka smoothest in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xidhiidha dib u soo celinta ee kaarka SDXC ku fudayd iyo qanacsanaanta ka dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ugu wanaagsan u isticmaasho barnaamijka soo degsado version maxkamadda ugu horeeyay sida ay tahay version maxkamad taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti lahayn oo dhan ku dhex jira. Kabashada card SDXC ayaa waxaa loo tixgeliyaa sida hawl adag si ay u qabtaan hor inta uusan barnaamijka ku xusan ayaa la bilaabay, laakiin hadda howsha siman iyo awoodda in ay la tacaalaan qadar weyn oo ah xogta hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay oo aan arin kasta oo dhibaato oo waafaqsan shuruudaha soo kabashada. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa inay raacaan tallaabooyinka la xiriira soo kabashada xogta oo la sheegayo in qaybtan si loo hubiyo in natiijooyinka laga helay waa kuwa ugu khayr iyo gobolka of tahay in arrintan la xiriira ka.
Habka loo isticmaali karo si loo hubiyo in ay ka kooban kaarka SDXC waxaa lagu soo kabsaday fudayd iyo qanacsanaanta waxaa ku xusan sida soo socota:
1. Laga soo bilaabo http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay si aad u hesho socda iyadoo la isticmaalayo software iyo nidaamka la xidhiidha:
2. nooca file ayaa markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in ugu fiican iyo habka ugu dadaala waa la qaatay u soo kabashada ee xogta:
3. In talaabada ugu fiican user ay u baahan tahay in la hubiyo in goob file waxaa lagu qeexay sida ay u hubiyaan in load nidaamka la tir marka ay timaado soo celinta xaddi badan oo xogta ka dhigi lahaa. Waxa kale oo ay ka dhigi lahaa hubiyo in software isticmaalo khayraadka nidaamka si ay u baadhaan oo keliya qaybo ka mid ah disk ah kuwa meesha barnaamijka la amray ama qasaaraha file ka dhacay. Haddii disk oo dhan waa la baaray ay wakhti qaadan doonto daray waxaa jiri lahaa load ah oo ku saabsan nidaamka:
4. Marka files ah ayaa la helay user markaas u baahan yahay si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo in la hubiyo in waxyaabaha la doonayo waxaa lagu riixi oo la doortay si ay kaliya waxyaabaha kuwa soo kabsaday iyo liiska buuxa item in dib loo soo celiyo waxa kale oo uu noqon karaa mid kabsaday kaliya haddii user uu doonayo inuu noqdo. Garaacista badhanka soo kabsado hubiyo in hannaanka waxaa halkan ku dhamaaday ka dhigi doonaa:
Faa'iidada iyo khasaaraha isticmaalka kaarka SDXC
Sida barnaamij kasta oo kale kaadhka SDXC leeyahay faa'iidada iyo khasaaraha ay taas tahay sida soo socota:
1. user waxay badbaadin kartaa naf dhibkeed xogta meel hal iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ay xasuus kaydinta la ma loo baahan yahay in la bedelo ama qof la xaqiijin doono in ay iibsadaan kaadh cusub.
2. xawaaraha qoraal xogta waa in si deg deg ah u dhaxeysa from104MB / s inay 300MB / s taas oo aan sare oo keliya, laakiin sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka.
1. user ayaa ku kaydsan xogta hal meel oo weligiis lagu lumin karaa haddii ay wax dhacaan in kaarka taas oo faa'ido weyn.
2. Taageerada software kaarka ma kaco oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in haddii kaarka kharribmay ama arrinta dhacdaa qofka ku habboon waa ay adag tahay in la helo.
> Resource > Memory Card > card SDXC Best kabashada Software